Nhau - Shandong Fuda Shanduko Co, Ltd.
Mumakore achangopfuura, kubudirira kunoshamisa kwakaitwa mukuvandudzwa kwesimba nyowani, uye kuvandudzwa kwesimba nyowani indasitiri inomiririrwa neiyo photovoltaic simba rekugadzira indasitiri yapinda munzira yekukurumidza. Nemakore makumi matatu nerimwe ezviitiko mukutapurirana kwesimba uye kugoverwa, Shun anotarisa pakutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa nekutengesa zvemhando yepamusoro zvemagetsi zvigadzirwa, uye yakazvipira kupa yekutanga kirasi mhinduro yesimba pasirese uye kuvaka kwezvivakwa.
Munguva yekutanga kwebasa redenda gore rino, Shandong Fuda Shanduko Co, Ltd. yakagamuchira nhau dzakanaka. Iine hunyanzvi hwemberi uye hwakapfuma wepasi rose hunyanzvi ruzivo, kambani yakahwina iyo 916300 kVA photovoltaic bhokisi shanduko chirongwa cheOman IBRI Phase II simba rezuva chirimwa, ichive yakakosha mutengesi weakakura emuno magetsi uye muridzi wemagetsi (ACWA).
Oman IBRI Phase II Solar Plant iri mudunhu reOman mainland (Ad Dhahirah) anenge 100km, kubva kumahombekombe anenge 100km. kubva kumuganhu weUAEI IBRI Phase II chiteshi chemagetsi chinotarisirwa kuiswa mukushanda pakati - 2021 uye ichava chirimwa chikuru chemagetsi ezuva muOman, chirongwa chikuru chezuva chephotovoltaic muOman. Iyo fekitori ichagadzira magetsi akakwana kune dzinosvika makumi matatu nematatu dzimba, ichideredza CO 2 nemazana mazana matatu nemakumi matatu ematani ematani emwaka pagore, ichizadzisa zvakanyanya simba renharaunda nesimba rekushandisa.
Nekuda kwetembiricha yakakwira yemuno yeprojekti, inzvimbo inopisa yemugwenga. Inopfuura hafu yetembiricha yegore inopfuura 40 ℃. Mamiriro ekunze ane tembiricha yakakura musiyano, guruva rakawanda uye kukura kwemhepo kwakasimba kune zvakanyanya kuvimbika dhizaini dhizaini yechigadzirwa. Mukutarisana nematambudziko ehunyanzvi senge kupisa kupisa, kukwira kwekushisa, kurasikirwa nehupenyu, Shun Midziyo yemagetsi yakasimuka kusvika kumatambudziko, yakaronga timu yenyanzvi kuti inyatso kutaurirana nevatengi, yakabudirira kupfuura nemumatambudziko mazhinji ehunyanzvi, uye mhinduro dzakagadzirirwa dzakapihwa vatengi vave zvikuru kuzivikanwa. Mukutarisana nenguva yekukurumidzira kuendesa, vanhu veShunte vakarongeka zvakarongeka, vakatsvaga kugona, uye vakabudirira kupedzisa kuendesa kweese zvigadzirwa panguva yakarongwa pakuuya kweZuva reNyika.
Shandong Fuda transformer yakahwina makuru mapurojekiti muiyo photovoltaic munda nesimba rayo, senge:
Algeria 233MW PV Chirongwa
Vietnam HCG & HTG PV Chirongwa
Vietnam DAMI Inoyerera Mvura PV Chirongwa
Changzhi Photovoltaic Power Generation Technology Inotungamira Base Licheng Project
Guangdong YueWeaving Farm (Chikamu II) Photovoltaic Composite Project
Photovoltaic Power Generation Project yeBeishan Ranch, Chikamu chechitanhatu cheGuangdong Hydropower,
Guangdong Hydropower Goridhe Shongwe PV Grid - yakabatana Power Generation Project
Power Generation Project inoenderana Photovoltaic Power Station, Qushui Chabala Township, Tibet
Kuwanikwa kweprojekti iyi zvakanyanya kuratidza simba rakazara rekambani, Shunte Midziyo yemagetsi zvakare yakaramba muyedzo wemhepo nemvura, yakakunda kuvimba nekusigirwa kwevatengi. Ticharamba tichitora nzira yemhando yepamusoro kusimudzira, kupa mhando-yepamusoro, yakachengeteka uye yakavimbika simba rekutepfenyura uye kugovera zvigadzirwa nemasevhisi sebasa redu pachedu, kutungamira indasitiri uye kubatsira nzanga.